Sylvan Hill House Map: Explore Dromore on TripAdvisor
Dromore RECENTLY VIEWED No results found JOINinSearch About DromoreHotelsHoliday RentalsRestaurantsThings to doFlightsTravel ForumAirlinesTravel GuidesBest of 2017Help CentreLog in Join My Trips Bookings Rental Inbox Browse
Sylvan Hill House Map
Europe United Kingdom (UK) Northern Ireland County Down Dromore Hotels
Free Newsletter Interested in Dromore?
We'll send you updates with the latest deals, reviews and articles for Dromore each week.
Map of Sylvan Hill House
Spend time in Dromore Holiday rentals are ideal for your longer stay.
Dromore weather essentials
46°F 7°C 39°F 3°C 4 in 11 cm More weather for Dromore
Lisnacurran Country House B&B (Dromore, UK)
Show Prices US$88 - US$100
#1 of 2 B&Bs in Dromore
“ Beautiful house and great service ”
top quality B & B with top hotel service. Room immaculate, airy & fresh... more 15 June 2017
Clanmurry (Dromore, UK)
Lower Quilly Road, Dromore BT25 1NL, Northern Ireland
#2 of 2 B&Bs in Dromore
“ Perfect base to relax and explore NI ”
Beautiful house with wonderful gardens! John and Sara were absolutely... more 26 October 2016
Sylvan Hill House (Dromore, UK)
76 Kilntown Road, Dromore BT25 1HS, Northern Ireland
#1 of 1 hotels in Dromore
“ The epitome of Irish hospitality ”
With the warmest of welcomes, Elise and Jimmy invite you into their home... more 10 November 2010